‘ज्वरो नाप्नेछौं, यात्रुलाई मास्क र सेनिटाइजर दिनेछौं, बस आधा खाली राख्नेछौं’ : बस व्यवसायी – Dainik Sangalo
विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लामो समयको लकडाउनसँगै सबैभन्दाबढी प्रभावित बनेको यातायात क्षेत्र सरकारले असोज १ गते देखि लामोदुरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएसँगै छिटफुट रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । ६ महिना लामो लकडाउनपछि लामो दुरीका सवारीका साधन सञ्चालनमा आउने भएपनि स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापन तथा लामो समय त्यसै थन्किएर रहेका सवारीको मर्मतलगायतका चुनौतीहरु भने यथावत नै रहेका छन् ।
सरकारले लामो दुरीका सवारीका साधन सञ्चालनमा आउन दिने भने पनि व्यवसायीहरुले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरी यातायात सञ्चालन गर्दै छन् भन्ने बारे पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी प्रालिका सञ्चालक ( तत्कालिन पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ) नारायण घिमिरेसँग खसोखासकर्मी सुरज घिमिरेले गरेको कुराकानी ।
महामारीकाबीच कसरी यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ?
विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लामो समयको लकडाउनसँगै सबैभन्दाबढी प्रभावित बनेको यातायात क्षेत्र हो । नेपाल सरकारले असोज १ गते देखि लामोदुरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएसँगै हामिले छिट्फुट रुपमा सञ्चालन सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका छौं । हाम्रो प्रालि अन्तर्गतका २५ सय सवारीसाधन मध्ये हामीले ५ प्रतिशत सवारी साधन मात्र सञ्चालनमा ल्याएका छौं । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम पनि कायमै रहेको र यात्रुलाई पनि आवतजावतमा सजिलो होस भन्ने उद्धेश्यले हामिले असोज ६ गते ५० प्रतिशत सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा ल्याउने योजना गरेका छौं ।
लामो समय त्यत्तिकै थन्किएर रहेका सवारी साधन पुनः सञ्चालन गर्दा थप अप्ठ्यारो होला, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले ६ महिना बढी लकडाउन व्यहोर्यौ, मुलुक विपदमा परेको अवस्थामा सर्वसाधारणको सेवाको लागि सरकारको निर्णयलाई पालना गर्दै यातायात सूचारु गर्नेे निर्णय गरेका हौं । लामो समय गाडीहरु थन्किएर रहे घाम र पानीले धेरै गाडीहरुको ईन्जिन खराब भएका छन् । हामीले सवारीसाधनहरुलाई सुरक्षित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउने छौं ।
राज्यले निर्णय गरेका अनुरुप यात्रुलाई बसमा चढाउनु अघि सेनिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गर्ने, ज्वरो जाँच गरेर बसभित्र प्रवेश गर्न दिइने, बसभित्र भौतिक दूरी कायम गरिने, सहचालकले पीपीई लगाएर मात्र काम गर्न लगाइने जस्ता मापडण्डहरु पूरा गर्ने छौं ।
कोरोनाले मारमा परेका, ऋणमा परेका यस प्रालि अन्तर्गतका यातायात व्यवसायीहरुलाई सहुलियदरमा पछि तिर्ने गरी केही रकम उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छौं । जसले गर्दा व्यवसायीलाईहरुलाई सहज हुनेछ ।
यातायात क्षेत्रमा हालसम्म के–कति आर्थिक क्षति पर्यो होला ? त्यसलाई पूर्ति गर्न कति समय लाग्ला आंकलन गर्नु भएको छ ?
लामो समयको लकडाउनसँगै सबैभन्दाबढी प्रभावित बनेको यातायात क्षेत्र हो यो कुरा सबैलाई अवगत नै छ । हामिले आर्थिक क्षतीलाई आकलन गरेको छैनौं । लामो समय गाडीहरु चौर वा बसपार्कमा रहे । घाम र पानिले धेरै गाडीहरुको ईन्जिन खराब भएका छन् । गाडी व्यवसायीहरुलाई आर्थिक रुपमा पहिले कै अवस्थामा पुग्न केही वर्ष लाग्छ त्यो हामिले आकलन गरेका छैनौं, त्यो कोरोना महामारीमा भरपर्ने कुरा हो । पहिलेकै जस्तै यातायात सहज रुपमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ ।
सरकारको तर्फबाट यातायात व्यवसायीहरुलाई गरिएका राम्रा व्यवस्था तथा थप गर्नुपर्ने कुराहरु के के छन् ?
हालसम्म सरकारले यातायात व्यवसायीहरुमा परेको मर्कालाई सहज रुपमा लिएको छैन् । केही आर्थिक राहत प्याकेजहरु ल्याएपनि ती प्याकेजहरु अस्पष्ट नै छन् । हामिले सरकार सँग राहतको माग गरेका छौं र गछौं पनि । मुख्य कुरा त हामिले प्रदेश सरकारसँग के अप्रेक्षा गछौं भने प्रदेश ५ का सबै प्रमुख जिल्लाहरुलाई बोलाएर वा उहाँहरुसँग बैठक बसेर यातायात सञ्चालनमा सहज वातावरण मिलाईदिन आग्रह गछौं । प्रत्येक सवारीसाधनमा कडा भन्दा कडा निगरानी गरेर, स्वास्थ्य सुरक्षामा कडा निगरानी गरेर यातायात सञ्चालनमा सहज बनाईदिन अनुरोध गर्दछौं ।
चाडवाडको समय छ, यात्रुहरुको भींड थप बढ्ने सम्भावना छ । कोरोना संक्रमणसँग पनि बच्नु पर्ने चुनौती छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
नेपालीहरुका महान चार्डपर्व वडा दशैं तथा विजयादशमी नजिँकिदै छन् । यो समयमा यात्रुहरुको उच्च चाप हुने गर्दछ । साथै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम छ । हामीले यात्रु गाडीमा चढिसकेपछि मास्क, सेनिटाईजरको व्यवस्थामा गछौं । गाडी भित्र हामीले ५० प्रतिशत मात्र यात्रुहरुलाई चढाउने छौं । यात्रुको संख्या बढ्दै गयो भने हामीसँग रहेका र सञ्चालन नभएका सवारीसाधनलाई पनि विस्तारै सञ्चालनमा ल्याउन्छौं ।
Prevदुःखद खबर; गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको करेन्ट लागेर मृत्यु
Nextसोनी संघर्ष समिति छथर समाज र परिवारले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार नै परे छक्क (हेर्नुहोस भिडियो)
आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल पौष ०७ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर २२ तारिख
ज्यान मा-र्ने ध म्की दिँदै सोनिका रोकाया आइन लाइभमा
दुःखद खबर एकै परिवारका तीन जनाले भि,रबाट हा,म फा,ले,र प्रा,ण त्या,गे…